Dagaalkii shalay Muqdisho ka dhacay oo soo gabagaboobay iyo Taangiyadii Saliibiyiinta oo Goobta Dagaalka ku gubanaya. | Halganka Online
Dagaalkii shalay Muqdisho ka dhacay oo soo gabagaboobay iyo Taangiyadii Saliibiyiinta oo Goobta Dagaalka ku gubanaya.
Posted on Luulyo 2, 2010 by halganka
Waxaa maqribnimadii caawa soo gabagaboobay Dagaal culus oo in kabadan 10 Saacadood oo xiriir ah ka socday halka ay iska galaan Degmooyinka C/Caziiz iyo Shangaani ee Magaalada Muqdisho halkaas oo ay isku fara saareen Ciidamo ka tirsan Wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir iyo Saliibiyiinta Yugaandha oo ay wehliyaan Maleeshiyo ka tirsan Kooxda Riddada ah .
Dagaalka ayaa bilowday barqanimadii maanta kadib markii Saliibiyiinta Yugaandha oo ku hubaysan In ka badan 10 Taangi ay weerar kusoo qaadeen Fariisimaha ay Mujaahidiintu ku leeyihiin Isgoyska ” Fiat” iyo Kawaankii hore ee Malaayga ilaa Dekadii Duqda ahayd, waxaana wixii markaas ka dambeeyay bilowday dagaal fool ka fool ah oo aan waxba la iskula harin.
Ciidamada Saliibiyiinta ayay ku adkaatay inay fooda soo geliyaan Difaacyadii Mujaahidiinta, waxaana durbadiiba Bohol loogu tala galay ku dhacay mid ka mid ah Taangiyadii Saliibiyiinta, isla markiina waxaa xigay inay Mujaahidiintu la beegsadaan Madaafiicda Garbaha laga rido ee loogu tala galay Taangiyada.
Saliibiyiinta ayaa Bohoshii uu Taangigu kaga dhacay waxay soo dul dhigeen 4 Taangi oo kale oo 3 ka mid ah ay difaacaysay, Halka mid kale uu isku deyaayay inuu Bohosha ka jiido Taangiga, Balse isku daygoodii ayaa wuxuu noqday ” Hal Bacaad lagu lisay” kadib markii Ciidamo si gaar ah ugu tababaran la dagaalanka Taangiyada ay dagaal xoogan la galeen Taangiyadii dagaalamaysay.
Dagaalka ayaa markii uu socday ku dhawaad 9 saacadood oo xiriir ah ayaa waxaa mar kale Bohol ku dhacay Taangi kale oo ay lahaayeen Saliibiyiinta Yugaandha, kadibna uu Gantaal la helay mid ka mid ah Ciidamada Mujaahidiinta, waxaana waagii ku baryay Saliibiyiinta Yugaandha oo meel ay wax ka bilaabaa garan waayay.
Ciidamada Kirishtaanka ayaa Madaafiic aan loo meel dayin u qaybinayay xaafadaha Magaalada Muqdisho si ay iskaga khafiifiyaan murugta ka haysata Furunta C/Caziiz, hase yeeshee Ciidamada Mujaahidiinta ayaa iyagaguna dhakooda ku garaacay Madaafiic ay jawaab uga dhigayaan duqeynta ay u gaysanayaa shacabka, waxayna u diideen Taangiyada Yugaandha inay Jiitaan Taangiga Gubanaya.
Warbaahinta u adeegta ajendaha Gaalada Saliibiyiinta ee ku hadasha Luqada Soomaaliga ah ayaa Mashxarad aan meel haysan u samaynaysay walaalahooda Kirishtaanka ah iyagoo Bulshada Muslimka ah ku Jiha-wareerinayay in Gaaladu ay guulo ka soo hooyeen Dagaalka ay Mujaahidiinta kula jiraan, Balse Allaah Fadligiis riyadoodii ayaa waxba kama jiraan noqotay, Allaah-na Cadowgiisii wuu jebiyay.
Saacadu markii ay ahayd 5:30 Galabnimo ayay Saliibiyiintu quus gaareen , waxayna ku qasbanaadeen inay badbaadsadaan inta u hartay ee hub iyo ciidan ah, iyagoo si fulaynimo ah uga carareen goobtii Dagaalka kuna laabteen xeryihii ay markii hore kasoo duulaan.
Wixii intaas ka dambeeyay Mujaahidiinta ayaa Takbiir, Taxmiid, Tahliil iyo Sujuudu-Shukri waxay ku damaashaadayeen goobihii lagu dagaalamay, Iyagoo daawanayay Taangigii Saliibiyiinta oo ololka iyo uurada ka baxaysa ay iyaga u ahayd Laab-qabowsi.
Ugu dambeyntii Cadowgii Allah ee wax is-mooday wuu jabay, sidoo kale waxaa la jabiyay Warbaahinta Gaalada eeu adeegta oo ay muuqatay xaqiiqda ay qarinayeen, Waxaanan leenahay حسبنا الله ونعم وكيل.
« Boqolaal katirsan Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo Galabta dhoolatusyo kusoo bandhigay bartamaha magaalada Kismaayo iyo Sheekh Cali Dheere oo sheegay in Ciidankaasi ay Xad beenaadka Kenya u dhaqaaqi doonaan. Abuu Mansuur “Shariif waa fulay is qaad qaad badan marka uu dharka ciidanka gashanayo ayuu saxaafadda u yeeraa Sheydaankii Beenta u sheegay waxba uma tarin”. »